Ngosipụta: Nyocha Ndị Ahịa Na Nghọta Na-arụ Ọrụ | Martech Zone
Nnukwu data abụghịzi ihe ọhụrụ na ụwa azụmahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche banyere onwe ha dị ka data-chụpụrụ; ndị isi teknụzụ guzobere akụrụngwa nchịkọta data, ndị nyocha nyochachara data ahụ, ndị ahịa na ndị njikwa ngwaahịa na-anwa ịmụ ihe na data ahụ. N'agbanyeghị na ịnakọta na nhazi data karịa mgbe ọ bụla, ụlọ ọrụ na-efu ihe bara uru banyere ngwaahịa ha na ndị ahịa ha n'ihi na ha anaghị eji ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji soro ndị ọrụ n'ofe njem ndị ahịa niile ma ọ bụghị ya, ha na-edegharị data ma na-ewebata njehie na nyocha ha.
Dabere na isiokwu a kapịrị ọnụ, otu ajụjụ ahaziri ahazi na SQL nwere ike iwe ihe karịrị elekere iji depụta ma weghachite. Ajụjụ ad hoc na-agbasi mbọ ike ịnye nyocha ndị ahịa na-eme ihe n'ihi na azịza nye ajụjụ mbụ gị nwere ike ịbụ ajụjụ ọzọ. Learn mụtara na ihe karịrị 50% nke ndị ahịa ndị pịrị na bọtịnụ CTA gị na-achọta ụzọ ha ga-esi banye na peeji nke nbanye, mana ihe na-erughị 30% nke ndị ahịa ahụ mepụtara profaịlụ onye ọrụ. Ugbu a gịnị? Oge erugo ide ederede ọzọ na SQL iji kpokọta mpempe egwuregwu ọzọ. Nchoputa ekwesighi ka odi otua.
Ihe ngosi bu isi ihe nyocha nke ndi ahia nke na enyere ndi oru ahia na ndi ozo aka ka ha ghara idi ike nke ihe ndi BI iji mee mkpebi site na ighota omume ndi oru n’elu uzo obula. Naanị Indicative na-ejikọ na ụlọ nkwakọba ihe data gị, na-achọghị mbiputegharị, ma na-enye ndị ọrụ azụmaahịa ike ịza ajụjụ nchịkọta ndị ahịa dị mgbagwoju anya na-enweghị ịdabere na ndị otu data ma ọ bụ SQL. Ndị njikwa ngwaahịa na ndị ahịa nwere ike ịgba ọsọ otu ajụjụ ahụ na sekọnd nke ga-ewe ndị nyocha data awa iji depụta. Ihe omuma data nwere ike ime bu uzo ato.
Kwụpụ 1: Kọwaa ebumnuche azụmahịa na metrik gị
Iji wuo usoro data dị irè, ị ga-ebu ụzọ kọwaa ebumnuche azụmahịa gị yana iji okwu ikpe. Achọpụtara nchịkọta ndị ahịa iji chụpụ mkpebi nke ngwaahịa na ahịa otu, yabụ na-arụ ọrụ azụ site na nsonaazụ ị tụrụ anya inweta. Ebum n’obi kwesiri idobe ya na ebumnuche azụmahịa. Ngosipụta nwere ike ịlele omume nke ndị ọrụ niile, ndị ọrụ ọ bụla, yana ihe niile dị n'etiti, yabụ ọ bara uru iji soro ndị na-egosi n'ọtụtụ ọkwa. Na-esote, chọpụta ọnụọgụ na KPI ndị nwere ike ịgwa gị ma ị na-aga nke ọma. Fọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ:
Mee ka onye ọrụ ọhụrụ gbanwee
Ibelata ụtụ magazin
Chọpụta ụzọ ahịa gị kacha dị irè
Chọta isi okwu nke esemokwu na nsụgharị gị
Ozugbo i kpebiri ihe i kpebiri ime, jiri azịza ajụjụ jụọ ajụjụ ị chọrọ iji azịza ya. Ọmụmaatụ, na-ekwu na ị na-aiming dịkwuo doro nke a ọhụrụ ngwaahịa atụmatụ. Lee ụfọdụ ihe atụ ị ga-achọ ịza ka ị na-enyocha ọrụ aka onye ọrụ gị:
Ndị ahịa adịchaghị anabatala ngwa ngwa karịa ndị ọrụ anaghị akwụ ụgwọ?
Ugboro ole ma ọ bụ ngebichi ka ọ na-ewe onye ọrụ iji ruo ngwaahịa ọhụrụ ahụ?
Nkuchi ohuru ohuru o nwere mmetuta di mma na njigide onye oru n'ime otu oge? Gafere otutu oge?
Iji ngwa nyocha ndị a na data ịza ha, inwere ike igwu n’ime ọtụtụ puku omume ndị ọrụ gafere njem ndị ahịa niile. Kwadebe iji nwaa echiche nwa oge iji nwaa echiche gị.
Nzọụkwụ 2: Sochie Njem Ndị Ahịa Gị Na Njem Ndị Ahịa Multipath
Akụkụ bụ isi bụ Multipath ahịa Journey. A na-egosipụta njem ndị ahịa dị ka olulu dị ọtụtụ, na-egosi usoro nke ndị ọrụ site na mkpebi dị iche na saịtị gị ma ọ bụ ngwa mkpanaka. N’ile anya njem a na - enyere ndị na - eme ngwa ahịa na ahịa aka ị kpughee akparamagwa ụfọdụ na akara aka ndị na - eme ka nnweta, njigide, ma ọ bụ ọnya.
Egkekọrịta olulu ahụ na-enyekwa ndị otu gị ohere ịchọta isi okwu nke esemokwu ebe ndị ọrụ na-agbaso omume kachasị mma ma ọ bụ pụọ na ngwaahịa ahụ kpamkpam. Multipath Customer Journey na-enyekwa ụlọ ọrụ ahụ aka ịmata isi mmalite ya nke na-adọrọ mmasị ndị ahịa, na-agbaji akụkụ nke olulu ahụ iji tụnyere njem ndị ahịa yiri ya. Ndị otu ga - ejikọ ụzọ ụzọ ngwaahịa ha iji dozie nsogbu na ahụmịhe onye ọrụ yana ịchọrọ ịmeghachi nsonaazụ nke ndị ahịa dị mma.
Kwụ na Drkwụ 3: malite ịgba miri emi na Cohorts na Profaili
Ozugbo inyochachara ụzọ ndị ọrụ si esonye na ngwaahịa gị, ndị ahịa gị nwere ike ime ihe na mkpọsa nke na-elekwasị anya ndị ahịa ahụ nwere ike inwe ndụ dị elu. Ngosipụta na-enye gị ohere ịkekọrịta ndị ọrụ site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nchọpụta ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche site na mmepe nke ndị na-eme omume. You nwere ike ịchọta:
Ndị ọrụ natara email izizi mbụ ha na ụtụtụ Mọnde nwere ike ịdenye aha karịa ndị na-anata nkwukọrịta mbụ ha n'izu.
Ndị ikpe na-akwụ ụgwọ na-agbadata ọ gwụla ma a gwara ha ihe ncheta, ikpe ha na-agwụ n'echi ya.
Ọ bụrụ na ndị ahịa gị chọrọ inweta kọmpụta, Ngosipụta na-enye profaịlụ onye ọrụ, na-enye ha ohere itinye ego nke ndị ahịa kacha mma. N'ime ụlọ nkwakọba ihe data gị bụ ndekọ nke ọrụ ọ bụla. Nkọwapụta onye ọrụ na Indicative na-eburu gị na njem ndị ahịa niile, site na mbido mbụ na nke kachasị ọhụrụ. Akụkụ ọdịnala na ndị nkuzi na-ebuli elu maka azụmaahịa ahaziri iche.
Enwere ọla edo zoro n'ime ụlọ nkwakọba ihe data gị, na Indicative na-enyere gị aka ị nweta ya. Chọghị ihe ọmụma nke koodu ma ọ bụ ekele maka akụrụngwa data ịchọta ihe ọmụma gbasara nyocha. Ihe niile ị chọrọ bụ ngosipụta ngwaahịa nke egosi na ịnweta data njirimara nke ụlọ ọrụ gị.
Gbalịa igosipụta ihe ngosi
Tags: bibidoro datachurnOmenala cohortsahịa nnwetaahịa nchịkọtaahịa churnnjem ndị ahịanjigide ndị ahịaahịa nkewaegosimultipath ahịa njemOgbe mmiriprofaịlụ